Mpamatsy solifara Barium sy orinasa - Mpanamboatra solifara Barium any Chine
Sulphate barium ho an'ny vera
Kristaly orthorhombika tsy misy loko na vovoka amorpôra fotsy. Ny hakitroka dia 4.30. Ny haavon'ny lelan dia 1580 ° C. Saika tsy voavaky anaty rano, étanol ary asidra. Vonoina amin'ny asidra solifara marihitra mafana, mora ny manangona raha maina. Ny karbaona dia azo ahena ho barium sulfide amin'ny 600 ° C.
Barium sulfate ho an'ny pad pad
Sulfat barium sulfate voajanahary voajanahary avo lenta ary novokarin'ny teknolojia fanasokajiana vato mandroso. Ny vokatra dia manana fizarana haben'ny sombintsombiny tery, velarana kely voafaritra manokana ary fitoniana simika avo lenta. Votoatin'ny sulfate barium, fotsy fotsy, fahadiovana avo, fanoherana ny fahanterana. Mandritra izany fotoana izany dia azo hatsaraina ny fahamendrehana, ny tsy fitoviana ary ny fanoherana ny vokatra, ary tsara ny fitoniana. Izy io dia afaka mandray taratra X-taratra sy taratra γ ary manome ny fitaovana manana hakitroka avo kokoa sy famaranana ambonimbony.
Barium sulfate dia azo ampiasaina ho extender hampihenana ny habetsaky ny diôdiôma titanium ampiasaina ary hanatsara ny fahombiazany. Ny fitrohana solika tena ambany sy ny fitomboan'ny haavon'ny haavony dia afaka mamonjy fitaovana ara-pototra resin betsaka kokoa.
Izy io dia novokarin'ny fizotry ny rotsakorana simika mandroso, miaraka amin'ny toetra ara-batana ambony, tsy dia maloto mekanika, fahamendrehana tena mitovy, vovoka fotsy tsy misy fotony, tsy misy poizina, tsy mety levona anaty rano, mety levona amin'ny asidra solifara manjavozavo, mora levona amin'ny mangotraka Ny asidra hydrochloric dia simika marin-toerana, ary ahena ho sulfida barium miaraka amin'ny karbaona izy io. Tsy hiova loko izany rehefa mifanena amin'ny hidrôzenina hidrôida na gazy misy poizina eny amin'ny rivotra izy. Izy io dia vokatra avo lenta amin'ny vokatra an-trano mitovy amin'izany. Ny fanampiana ny barium sulfate amin'ny fampiharana dia afaka manome gloss avo lenta ny fitaovana, tsara ny fanaparitahana azy ary afaka mampihena ny vidiny.
Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra, ny fitsaboana amin'ny interface simika dia atao amin'ny barium sulfate. Ny vokatra dia notsaboina tamin'ny sehatra biolojika na tsy biolojika mba hampihenana ny fihenjanana anaty ary manana fanaparitahana sy fifanarahana tena tsara. Ny barium sulfate novaina dia manana fizarana habe amin'ny sombiny, fotsy be dia be ary tsy misy loto. Izy io dia manana fifandraisana akaiky matanjaka ary manome ny fitaovana avo lenta kokoa sy farany famaranana.
Sulfat barium sulfate avo lenta
Sulfat barium sulfate avo lenta, voangaly sulfate barium avo lenta voafantina novokarin'ny teknolojia fanodinana baolina sy fandrosoana. Ny vokatra dia manana zara fizarana haben'ny zaridaina, fananana simika miorina, gloss tsara, fotsifotsy avo, ary fananana miparitaka sy manatsara.
Ny sulfate barium avo-gloss dia misy asidra tsara sy fanoherana sira alkali, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny harafesina ary fanoherana ny fahanterana. Izy io dia afaka manatsara ny hamafisan, ny tsy fitoviana ary ny fanoherana ny vokatra ary hampamirapiratra sy maharitra ny vokatra. Izy io koa dia azo ampiasaina ho extender hampihena ny habetsaky ny titanium dioxide ampiasaina ary hanatsara ny fahombiazany. Ny fitrohana solika tena ambany sy ny fitomboan'ny haavon'ny haavony dia afaka mamonjy fitaovana ara-pototra resin betsaka kokoa.
Amin'ny fampiasana teknolojia nanoteknolojia avo lenta, vovoka vita amin'ny kôlesterika sy tsy mikraoba ny vokatra. Ny fizarana haben'ny sombintsombiny, ny fitoniana simika tsara, ny fampiakarana avo lenta, ny fanaparitahana tsara, ny fotsy fotsy ary ny toetra hafa. Fahadiovana avo, fanoherana asidra, fanoherana alkali, fanoherana ny hafanana avo ary tsy fahaverezan'ny gloss, fanoherana famafazana sira tsara ary fanoherana ny toetrandro. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny loko isan-karazany amin'ny rano, loko vita amin'ny rano, ranomainty, plastika ary vokatra hafa. Izy io dia afaka mitazona ny mangarahara amin'ny vokatra. Izy io dia azo ampiasaina ho masterbatch mangarahara amin'ny barium sulfate, ary afaka manatsara ny gloss ambonin'ny, ny hamafin'ny sarimihetsika, ny fanoherana ny toetr'andro, ary ny fifantohana amin'ny fanampiana.
Barium sulfate ho an'ny loko
Barium sulfate ho an'ny lokon'ny solika